Dalal Turkiga uu ka mid yahay, oo Mareykanka la dhacay ushiisii - Tilmaan Media
Dalal Turkiga uu ka mid yahay, oo Mareykanka la dhacay ushiisii
Dibedbaxayaasha ayay booliska ku kala eryeen sunta in dhaha ka ilmeeysay, kuwaas oo sababay in bandow lagu soo rogay. Madaxweynaha waxa uu ku hajabay inuu waddooyinka ku soo daad-gureynayo ciidamo milatari ah.
Xasaradda ka taagan Mareykanka waxay ka dhalatay dilkii George Floyd, arrintaas oo qarisay wararkii Fayraska corona ee qeybo ka mid ah dunida.
Waddamadii inta badan Mareykanka uu ku dhaleeceyn jiray iney ku xad-gudbeen dimuqraadiyadda, kuwaas oo warbaahintana ay aad usoo tabin jireen waxay hadda u muuqataa iney ku raaxeysanayaan mudaaharaadyada ka socda Mareykanka oo mowjadda ay isu rogtay dhanka xukuumadda Washington.
Jaraa’idka maalinlaha ah ee Global Times oo uu Shiinaha leeyahay, ayaa lagu daabacay sida uu Mareykanka uga falceliyay dibadbaxayaasha ka soo horjeeda dilkii George Floyd.
Wargeyska ayaa akhristeyaasha xusuusiyay in siyaasinyiinta Mareykanka ay sheegeen in mudaaharaadyada ay yihiin kuwa ka turjumaya dimuqraadiyadda.
“Tifaftiraha guud ee wargeyska Hu Xijin ayaa qoray: “Dibadbaxyada Hong Kong waxay socdeen muddo sannad ah, wax milatari ahna lama adgeesan. Balse Minnesota oo sadex maalmood oo kaliya ay ka socdeen mudaaharaadyo ayuu Trump goob fagaaro ah uga gooddiyay inuu isticmaalayo awooddiisa uuna ciidamo milatari ah ku daabulayo goobaha dibadbaxyada ka socdaan”.
Mareykanka waxa uu in muddo ah dhaleeceynayay doorka uu Shiinaha ku leeyay Hong Kong tan iyo markii ay bilowdeen 2014-kii dibadbaxyada dimuqraadiyadda lagu doonayay ee Hong Kong.
Xitaa goor dhoweyd waxaa Hong Kong ka jirtay xasilooni darro ka dib markii lagu dhawaaqay qorshaha Shiinaha ee ahaa in lagu soo rogo magaalada sharci cusub oo dhanka amniga ah kaas oo sababay in dadka reer Hong ay ka cabsadaan iney waayaan xornimadoodii.
Mareykanka ayaa taageero xooggan u muujiay mudaaharaadayaasha isagoo Shiinaha ugu baaqay inuu xushmeeyo xuquuqda dadka Hong Kong.
Durbadiiba markii ay bilowdeen mudaaharaadyada looga soo horjeedo dilkii George Floyd, wakaaladda wararka Iran ee FARS ayaa daabacday qoraal Trump ka dhan ah kaas oo tibaaxayay in Trump uusan gudan waajibaadkii ahaa in Mareykana uu difaacayo bulshooyinka madowga kuwaasi oo ah shuruuc ka jirtay caalamka oo dhan.
“Mareykanka waxa uu dalalka kale ku eedeeyaa iney ku xad-gudbeen xuquuqda bini’adanka” balse waxa uu si joogta ah isaga indha tirayaa inuu aqbalo tacdiiyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee gudaha dalkaas laga geysto iyo kuwa ciidankiisa ay ka geystaan bariga dhexe”, Waa sida lagu daabacay wakaaladda FARS.
Dhanka kale warbaainta qaranka Iran ayaa soo werisay Wasiirka Arrimaha Dibedda Iran, Mohammad Javad Zarif oo tacaddiyada booliska Mareykanka ee dadka asalkoodu yahay Afrikaanka, la bar-bardhigay cunaqabteennada Iraan uu Mareykanka ku soo rogay.
Warbaahinta Ruushka ayaa sidoo kale Mareykanka ku tilmaantay “munaafaq.”
Weriye Dmitry Kiselyov ayaa telefishan ka sheegay in haddii dhacdo tan la mid ah ay Ruushka ka dhici lahayd, “Mareykanka iyo waddamo kale waxay dhihi lahaayeen waa waxaan la aqbali karin”, xukuumadda Moscow-na cunaqabateen cusub ayaa lagu soo rogi lahaa.
Tan iyo markii Ruushka iyo Ukraine ay isku dhaceen, dowladda Mareykanka waxa ay cuna-qabteyno ku sooo rogtay saraakiil iyo ganacsiyo ruushka ah.
Turkiga – wargeyska Yeni Safak ee taabacsan dowladda ayaa daabacay in madaxweyne Erdogan uu barta Twitter-ka ku sheegay inuu aad uga xun yahay dilka George Floyd kaas oo uu sababay ficil la xiriira midab takoor.
Warbaahinta Sabah ayaa sidoo kale soo werisay: “Ma neefsan karo” waa hadalkii ugu dambeeyay ee George Floyd.
Dibadbaxyadii 2013-kii ka dhacay Turkiga saraakiisha Mareykanka ayaa walaac ka muujiyay warakii ku saabsanaa awoodda ay booliska u adeegsanayeen dadkii isu soo baxay iyagoo dowladda madaxweyne Erdogan ugu baaqay iney ixtiraamaan xuquuqda banaanbaxayaasha.
Tags: dhaleecaynta Maraykanka
Kulamo usocday Villa Somaliya iyo Dowlad Goboleedyada oo istaagay.
Jibuuti: Gabar 16 jir ah oo uu dhalay duuliyihii la xiray oo iyadana xabsiga la dhigay